I-Rabarberiwagen #R2 - I-SeaSide Village ❤ - I-Airbnb
I-Rabarberiwagen #R2 - I-SeaSide Village ❤
I-i-bungalow ephelele ibungazwe ngu-Andrejs
U-Andrejs Ungumbungazi ovelele
✿ Ukuzingena ✿ Lena indawo yokubalekela yomndeni engu-1 kwezingu-2, inesango layo lokungena eliyimfihlo nelendawo, elihlukile kubanikazi nezinye izihambeli. ✿ Ngezizathu zokuphepha Ukuwosa, i-BBQ, umlilo ovulekile nokubhema akuvunyelwe futhi akuvunyelwe kuyo yonke indawo. ✿Le ndawo iluhlaza, futhi yemvelo. Ukuthatha uhambo olunensayo ungafika ngasolwandle ngemizuzu eyi-15.
Indlu yohlobo lwe-Studio ingahlalisa izivakashi ezingu-2, enombhede olala abantu ababili e-mezzanine. Ukuze ujabule ngenkathi ulungiselela ukudla kwansuku zonke, indlu inekhishi elinethezekile.
Umoya omusha, ukubhukuda, ukugeza ilanga nokuhamba kwemvelo. E-Saulkrasti, e-White Dune, ungabona izinto ezimbalwa ezithakazelisayo zemvelo ezisikhuthaza ukuba silalele imvelo futhi siyibuke ngokucophelela.
I-Saulkrasti central Sea park ikumema ukuthi ujabulele izihlalo zamagumbi okuphumula ezilula, okokusebenza kwenkundla yokudlala, izindawo zokuzivocavoca zangaphandle, kanye nezindawo zokujima zasemgwaqweni kanye nenkundla ye-volleyball yasogwini, noma ukuzitika ngokubhukuda nokubhaka ikhekhe lesihlabathi.
Kokubili izingane kanye nabantu abadala bazothola imisebenzi ethokozisayo ngemuva kwenhliziyo yabo lapha.
Ngesikhathi sokugeza kusukela ngomhla ka-15 Meyi kuya ku-15 Septhemba, isevisi yokuhlenga, ukuqashwa kwebhodi le-SUP kanye nezihlalo zamagumbi okuphumula ziyatholakala ogwini lolwandle. Eduze nolwandle, kunezindawo zokudlela ze-“Mare”, “Costa del Sol” kanye ne-“Saules dārzs”.
➤ Ngena kusuka: 17: 00
➤ ukushisa inyama nokugaya akuvunyelwe
Ukungabhemi➤ & UMLILO - Kuwo wonke, kanye nendawo yangaphandle
➤ UMSINDO - Awekho amaphathi noma imicimbi
➤ ezwakalayo izivakashi ezingu- - Ngenxa yezizathu zokuphepha nokuvikeleka izivakashi ezibhalisiwe futhi ezikhokhelwayo kuphela ezingangena endaweni.
➤ UKUPHUMA - Kuze kube ngu-11:00 ekuseni, amashidi ombhede nelineni sicela ukhumule.
➤ Azikho IZICATHULO - Endlini
➤ Ukuhlanza - Indlu okufanele igcinwe futhi ishiywe ihlanzekile
➤ KUPHEPHILE - Amasango endawo akhiyiwe ngaso sonke isikhathi
➤ UKUTHWEBULA IZITHOMBE NOKUTHATHWA KWEZITHOMBE zamafilimu - akuvunyelwe
➤ UMSINDO - Awekho amaphathi noma imicim…
UAndrejs Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Saulkrasti namaphethelo